यो मंसिरमा पनि नबन्ने भयो गोरखा दरबार, ४५ प्रतिशत काम अझै बाँकी - Civil Khabar
by civilkhabar २०७७ कार्तिक १२, बुधबार ११:५४ २०७७ कार्तिक १२, बुधबार १२:२६ 0
गोरखा । गोरखा दरबार पुर्नमिाणको पछिल्लो म्याद मंसिर मसान्तमा सकिदैछ । तर दरबार पुर्ननिर्माणको काम भने सकिनेमा सरोकारवालाहरुले नै आशंका गरेका छन् ।
‘अब २ महिना पनि समय छैन, कार्तिक १३ गते सम्मका लागि काम स्थागित गरेर दशै मान्न कामदार पनि घर गएका छन्,’ गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भुषालले भने, ‘मंसिर मसान्त भित्र सकिन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । काम अझै ४५ प्रतिशत जति बाँकी छ ।’
गोरखा दरबार पुर्ननिमार्णको लागि थपिएको पछिल्लो म्याद मंसिर मसान्तमा सकिदै छ । अहिलेसम्म दरबारको भुँई र पहिलो तला निर्माण भएको छ । ‘भूँई तल्ला र पहिलो तल्लाको गारो लगाउने काम सकिएको छ । पहिलो तल्लामा दलिन राख्ने काम पनि सुरु भएको छ,’ उनले सिभिलखबरसंग भने, ‘दशै मानेर कामदार फर्किएर पछि त्यो काम कन्टिन्यूटी हुन्छ ।’
‘बल्ल दुई तलाको गारो बनेको छ । दशै तिहार भन्यो अब काम गर्ने दिन कति नै छ र’ एक स्थानीयले भने, ‘ठेकेदारलाई के भयो र ? फेरी समय थपिहाल्छ । काममा आलटाल गर्ने म्याद थप्ने मात्र काम भएको छ ।’ गोरखा जिल्ला निवासी समेत रहेका पचली शिवाको जेवीका प्रोपाइटर शुसिलबाबु श्रेष्ठले राजनीतिको आडमा दरबार पुर्ननिर्माणको काम नगर्ने तर म्याद लम्ब्याउने गरेको कपितयको आरोप छ ।
२०७४ कार्तिकमा पचली शिवाको जेभीले पुरातत्व विभागसँग ४ करोड ३२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७६ मंसिर मसान्तसम्मको निर्धारित समयसिमामा १ तल्ला पनि नबनेपछि २०७७ जेठ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । कामले रफ्तार लिएका बेला कोरोना संक्रमण फैलिएर लकडाउन घोषणा भएपछि पुनः ६ महिनाका लागि सयम थप गरिएको पुरातात्विक विभागले जनाएको छ ।
पुरातत्वले सिधै ठेक्का लगाएको हुँदा दरबार हेरचाह अड्डाले पनि नियमन र रेखदेख काम मात्र गर्ने गर्छ । यता निर्माण व्यवसायीले भने समयसिमा भित्रै काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन् । कोरोनाका कारण केही समस्या भएपनि अहिले पूर्ण रुपमा काम भइरहेकाले मंसिरसम्म सक्ने निर्माणकता पचली शिवाको जेभिले जनाएको छ ।
नेपालकै उद्गम स्थल एवं ऐतिहासिक गोरखा दरबार पुर्ननिर्माणकामा ढिलाई भएको प्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएको छ । देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले स्थलगत अनुगमन गर्दै काम छिटो गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । भूकम्प गएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि दरबार नबनेपछि सर्वसाधरण समेत चिन्तित भएका छन् । दरबार पुर्ननिर्माणमा ढिलाई हुँदा त्यहाँ हुने धार्मिक तथा सास्कृतिक कार्य पनि प्रभावित भएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
नेपालको ऐतिहासिक गोरखा दरबार र त्यहाँ रहेका विभिन्न संरचना बन्न ढिलाई हुँदा पर्यटनमा समेत ठूलो घाटा भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
‘बल्ल दुई तलाको गारो बनेको छ । दशै तिहार भन्यो अब काम गर्ने दिन कति नै छ र’ एक स्थानीयले सिभिलखबरसंग भने, ‘ठेकेदारलाई के भयो र ? फेरी समय थपिहाल्छ । काममा आलटाल गर्ने म्याद थप्ने मात्र काम भएको छ ।’ गोरखा जिल्ला निवासी समेत रहेका पचली शिवाको जेवीका प्रोपाइटर शुसिलबाबु श्रेष्ठले राजनीतिको आडमा दरबार पुर्ननिर्माणको काम नगर्ने तर म्याद लम्ब्याउने गरेको कपितयको आरोप छ ।
शाह बंशिय उद्गम थलो मानिएको जिल्लाको गोरखा दरबार तत्कालिन राजा रामशाहको पालामा बिक्रम संम्बत १६६६ ताका बनेको किम्मदन्ती छ । नेपालकै ऐतिहासिक गोरखा दरबार २०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भुकम्पले पुर्ण रुपमा क्षति पुगेपछि २०७४ पुसबाट भत्काएर जगैबाट पुनर्निमाण सुरु गरिएको हो ।
नेपालको ऐतिहासिक गोरखा दरबार र त्यहाँ रहेका विभिन्न संरचना बन्न ढिलाई हुँदा पर्यटनमा समेत ठूलो घाटा भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यद्यपी अहिले कोरोना संक्रमणको कारण सर्वसाधरणका लागि गोरखा दरबार क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस वर्षको दशैमा समेत सर्वसाधरणले गोरखाकाली मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएनन ।
आगो निभाउने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटना
civilkhabar २०७७ भाद्र ४, बिहीबार १५:५९
civilkhabar २०७७ आश्विन ६, मंगलवार १२:०६
जित नजिक बाइडेन, अदालती प्रक्रियामा गए ट्रम्प
civilkhabar २०७७ कार्तिक २०, बिहीबार ११:४७